संक्रमितको जीवन रक्षाका निम्ति प्लाज्मा दान अभियानमा चिकित्सक « Postpati – News For All
भदौ २५, काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचार कन्भेलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीबाट गर्न चिकित्सकले प्लाज्मा दान अभियान अघि बढाएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले ‘प्लाज्मा दान नै जीवनदान’ नारा अघि सारिएको बताए।
संक्रमितको जीवन रक्षाका निम्ति प्लाज्मा थेरापी वरदान सावित भएको संघले जनाएको छ। एक पिन्ट प्लाज्माबाट हजारौंलाई जोगाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन्। ‘कोरोना संक्रमितका साथै अन्य व्यक्तिमा त्रास फैलँदै गएकोेले मनोबल बढाउन पनि यो अभियान अघि सारिएको हो’, डा. कार्कीले भने, ‘संक्रमणपछि निको भएकाहरूलाई हेप्ने, छिःछिः दुरदुर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। समाजमा दुव्र्यवहार हुँदा लुकेर बसेका छन्। दुव्र्यवहार होइन सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि अभियान सुरु गरिएको हो।’
यो उपचार विधिको प्रयोग सन् १८९० मा पहिलो पटक गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१४ मा इबोला भाइरसको उपचारमा पनि प्लाज्मा थेरापी प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो। स्पेनिस फ्लुको उपचारमा पनि प्लाज्मा थेरापी प्रयोग गरिएको थियो। साथै, सन् २००९ मा फैलिएको एच१एन१ को संक्रमणका लागि पनि प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग गरिएको थियो। जर्मन भौतिकशास्त्री एमिल भोन बेहरिनले पत्ता लगाएका हुन्।
डा. विपिन नेपाल कोरोना संक्रमितका लागि प्लाज्मा थेरापी उपचार विधिको प्रोटोकल बनाउने टिममा संलग्न थिए। दुई महिनायता उनी व्यस्त छन्। मुलुकका एक मात्र रक्तसञ्चार विशेषज्ञ डा. नेपालले भने, प्रदेशमा रहेका ब्लड बैंक, अस्पतालबाट हरेक दिनजसो १०–१५ जना बिरामीका तर्फबाट फोन आउँछ। दाताको व्यवस्था गर्नै धौ धौ छ।’
उनका अनुसार कुनै पनि रोगसँग लड्न त्यसविरुद्ध शरीरले आफैंले एन्टिबडी बनाउँछ। निको भएपछि पनि एन्टिबडी शरीरमा भइरहन्छ। त्यहीँ एन्टिबडी निकालेर रोगसँग लड्ने क्षमता नभएको अर्को संक्रमितलाई चढाउने कार्य नै प्लाज्मा थेरापी हो। कोरोना संक्रमणबाट निको भएको व्यक्तिले एक पटकमा तीनदेखि चार जनासम्मलाई पुग्ने एन्टिबडी दिन सक्छन्। दाताले एक महिनामा दुई पटकसम्म दिन मिल्ने उनको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमणबाट निको भएकामध्ये कतिपय प्लाज्मा दान गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। प्लाज्मा झिकिएको व्यक्तिको शरीरमा एन्टिबडी घट्ने आशंका रहेको देखिन्छ। ‘एन्टिबडी दिएपछि शरीरमा घट्छ कि भनी दाता डराउनु पर्दैन। कोरोनाबाट निको भएको दुई सातादेखि तीन महिनासम्मको अवधिसम्म एन्टिबडी राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘एन्टिबडी धेरै भएको यहीँं समयमा दान गर्न सकिन्छ। दान दिँदैमा एन्टिबडीको लेभल घट्दैन। ’
उनका अनुसार रगत दान गरेजस्तै हो। रगत दिएको केही समयपछि सामान्य अवस्थामा आउन सकिन्छ। प्लाज्मा विधिबाट उपचार पाएर निको भएको व्यक्तिले पनि प्लाज्मा दान गर्न सक्छन्।
एक दाताबाट झन्डै चार सय एमएल रगत निकालिन्छ। रगतमा भएको राता रक्तकोष र प्लेट्लेट्सलाई बाहिर निकालिन्छ। त्यसपछि प्लाज्मा निकालेर फ्रिजमा राखिन्छ। उक्त प्लाज्मा बिरामीलाई दिइन्छ। श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको बिरामीलाई दिइने डा. नेपालको भनाइ छ। ‘बिरामी सिकिस्त अवस्थामा पुगेको हुन्छ। अंगमा क्षति पुुग्न लागेको अवस्थामा अन्तिम उपचारका रूपमा प्लाज्मा थेरापी विधि अपनाउँदै आइएको छ’, उनले भने। झन्डै ६० जनाले यस विधिबाट मुलुकमा उपचार गराइसकेका छन्।